စက်မောင်းဝန်ထမ်း (လှိုင်သာယာစက်ရုံ) အလုပ် at Unilever Myanmar Group in ရန်ကုန်တိုင်း | Alote Myanmar
ရန်ကုန်တိုင်း | ခေါ်ထားသောအလုပ် 1 ခု
လှိုင်သာယာ | ရန်ကုန်တိုင်း
လုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်များ တင်သောနေ့: 05 Nov 2021
လူသုံးကုန်နှင့်နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်း (ဆပ်ပြာခဲ၊ ဆပ်ပြာရည်၊ သွားတိုက်ဆေး) ထုတ်လုပ်သော စက်ရုံတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အတွေ့အကြုံရှိသော ပေါင်းကန်ဝန်ထမ်း၊ စက်မောင်းဝန်ထမ်းများခေါ်ယူခြင်း
(၁) ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်ကို ပြည့်မီစေရန်အတွက် စက်ယန္တရားများကို ဘေးကင်းလုုံခြုံစွာ လည်ပတ်နိုင်သော နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ထိရောက်စွာ အသုံးချနိုင်သော အရည်အချင်းရှိရမည်။ စက်ယန္တရားများ၏ လိုအပ်ချက်ပေါ်မှုတည်၍ သန့်စင်ပေးခြင်းနှင့် ချောဆီပေးခြင်း ဆောင်ရွက်ချက်များ လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။
(၂) ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်အပေါ်မူတည်၍ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာဖြင့် ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင် အရည်အသွေးစံချိန်စံညွန်းများကို ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ထုတ်ကုန်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ပြောင်းလဲခြင်း၊ သန့်ရှင်းမှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
(၃) ထုတ်လုပ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သော ယန္တရား၊ ရွေ့လျားမူ၊ ဓာတ်ငွေ့များနှင့်ပတ်သက်သော အဓိကအချက်အလက်များအကြောင်း သိရှိထားရမည်။
(၄) လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများဖယ်ရှားခြင်းနှင့် အန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းများမှန်ကန်စွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမည်။
(၁) ပညာအရည်အချင်း ~ အထက်တန်း (သို့) အထက်တန်းနှင့်အထက် ပညာအရည်အချင်းရှိသောသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
(၂) ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် စက်အော်ပရေတာအဖြစ်အတွေ့အကြုံရှိရမည်။
(၃) စက်စနစ်များကိုအသုံးပြုရာတွင် ပစ္စည်းရွေ့လျားမူ၊ ဆုံးရှုံးမှုနှင့် အရည်အသွေးကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည့် အရည်အချင်းရှိရမည်။ Miscrosoft Office (Word, Excel) အသုံးပြုနိုင်သောအလုပ်လျှောက်ထားသူများကို ဦးစားပေးရွေးချယ်သွားမည်။
(၄) Shift Assignment အလုပ်ပုံစံနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိရမည်။ အသင်းအဖွဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းလျင်မြန်သွက်လက်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သော အရည်အချင်းများရှိရမည်။
စက်ရုံတွင် စက်မောင်းဝန်ထမ်းအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖူးသောအတွေ့အကြုံရှိပါသလား?
May Kha San လှိုင်သာယာ | ရန်ကုန်တိုင်း
Vivo Group Co.,Ltd. လှိုင်သာယာ | ရန်ကုန်တိုင်း
လုပ်ငန်း ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီ လှိုင်သာယာ | ရန်ကုန်တိုင်း
Lucky Diamond ပန်းပဲတန်း | ရန်ကုန်တိုင်း
Golden Shape Myanmar ကမာရွတ် | ရန်ကုန်တိုင်း
Myanmar Carlsberg Co., Ltd. မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် | ရန်ကုန်တိုင်း
Cho Cho Co., Ltd. မင်္ဂလာဒုံ | ရန်ကုန်တိုင်း
Ammon Consulting (Myanmar) Co., Ltd ဗိုလ်တထောင် | ရန်ကုန်တိုင်း
AA Medical Products Ltd. (Pacific-AA Group) ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း | ရန်ကုန်တိုင်း
Manufacturing Executive (ရေသန့်)
Talent Experts မှော်ဘီ | ရန်ကုန်တိုင်း